Maamulka Puntland oo dib u habeynaya shaqaalaha rayidka ah – Radio Muqdisho
Maamulka Puntland oo dib u habeynaya shaqaalaha rayidka ah
Guddiga farsamada dib u habeynta shaqaalaha maamulka Puntland ayaa bilaabay diiwaan gelinta shaqaalaha.
Guddigan oo uu dhawaan magacaabay madaxweynaha maamulkaasi ayaa bilaabay diiwaan gelinta shaqaalaha rayidka ah ee maamulkaasi, iyagoo dib u eegaya aqoonta iyo xirfada shaqo ee qof kasta oo shaqaale ah, waxeyna ka qaadayaan Suul, si looga dhigo shaqaale rasmi ah.
Maxamed Faarax Ciise Gaashaan oo ah gudoomiyaha guddigaasi ayaa sheegay in guddiga loo xilsaaray in shaqaale kasta ay ugu tagaan wasaaradda ama hey’adda uu u shaqeeyo kana qoraan macluumaad dhameystiran oo ku saabsan aqoontiisa, shaqada uu hayo iyo xilligii la shaqaaleeysiiyay.
Guddoomiyaha guddigan ayaa tilmaamay in ujeedada ugu weyn ee howshan ay tahay tirakoobka shaqaalaha iyo in kor loo qaado nolosha shaqaalaha si mushaaraadka loogu kordhiyo.
Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha maamulka Puntland C/raxmaan Sheekh Axmed ayaa sheegay in tirada guud ee shaqaalaha maamulka Puntland uu ku dhowyahay Lix kun, wuxuuna intaa ku daray in tirada saxda ah ee shaqaalaha ay si dhab ah u soo bixi doonto marka la dhameeyo howsha tirakoobka ah ee hadda socota.